Congress-ka Maraykanka Oo Diyaarinaya Cunaqabatayn Ka Dhan Ah Hogaamiyayaashii Afgambiga Ku Qabsaday Suudaan » Axadle Wararka Maanta
Congress-ka Maraykanka oo diyaarinaya cunaqabatayn ka dhan ah hogaamiyayaashii afgambiga ku qabsaday Suudaan
By Newsroom	 Last updated Dec 10, 2021
KHARTOUM — Guddiga Arrimaha Dibadda ee Aqalka Koongareeska Mareykanka ayaa maanta oo Khamiis ah cod aqlabiyad ah ku meel mariyay sharciga Dimuqraadiyadda Sudan iyo qaraar lagu cambaareynayo afgambigii militariga ee 25-kii October.
Sharcigu waxa uu soo rogayaa cunaqabatayn la beegsanayo oo ay ka mid yihiin, kuwa caqabada ku ah isbeddelka dimoqraadiga ah ee Suudaan, khatarta ku ah xasilloonida, xaddidaya xorriyadda hadalka ama gelitaanka warbaahinta, ku kaca xadhig aan sabab lahayn ama jirdil, ama lunsada hantida dawladda Suudaan.
Cunaqabatayntan waxaa ka mid ah mamnuucid fiisaha iyo xannibaadda hantida.
Si kastaba ha ahaatee, sharcigan ayaa u ogolaanaya Madaxweynaha in uu ka tanaasulo cunaqabateynta haddii uu u arko in ay dani ugu jirto Mareykanka uuna ka codsado in uu Congress-ka u sheego ka dhaafitaanka.
Codeynta labada qoraal ee guddigu waxay u gogol xaaraysaa in cod buuxa lagu qabto aqalka golaha.
Sidoo kale, waxa golaha guurtida la horkeenay sharci isku mid ah iyo qaraar lagu cambaaraynayo afgambigii 25-kii October.
Khartoum, dimuqraadiyiinta Suudaan waxay rajeynayaan in ansixinta la filayo ee sharciga ay kordhin doonto cadaadiska hoggaamiyeyaasha afgambiga ah ee hor istaagay isbedellada dimoqraadiyadda.
Jeneraalka Suudaan ayaa kala diray dowladdii kumeelgaarka, waxaana ay ku dhawaaqeen xaalad degdeg ah oo dalkaas lagu soo rogay iyagoo ku eedeeyay hoggaamiyeyaasha siyaasadda inay dayaceen isbedellada kala guurka ah oo ay doonayaan inay awood u yeeshaan xisbiyadooda.
Isbaheysiga siyaasadeed ee Isbaheysiga Xoreynta iyo Isbeddelka (FFC) ayaa sheegay in ciidamadu ay doonayaan in ay ka fogaadaan caddaaladda, kala dirista maleeshiyada RFS iyo in la mideeyo jabhadihii hore ee ciidamada qaranka cusub.
Milatarigu sidoo kale ma muujin xamaasad ay ku joojinayaan dhaq-dhaqaaqooda dhaqaale iyo ganacsiba dib u habayn isdaba joog ah oo ay ku heshiiyeen FMI iyo Bangiga Adduunka.
Isagoo ka hadlaya dadaalka Congress-ka ee socda ee lagu doonayo in lagu cunaqabateeyo hoggaamiyeyaasha afgambiga ee Suudaan, Ned Price af hayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegay in maamulkiisu uu hadda qiimeynayo horumarka laga sameeyay dhulka si loo eego haddii ay horseedi karto dib u soo celinta ku-meel-gaarkii rayidka ee ay hoggaaminayeen.
Waxa uu intaasi ku daray inay doonayaan inay eegaan in dib u soo celinta Ra’iisul Wasaaraha ay dhabaha u xaareyso in dib loogu soo laabto nidaamka dastuuriga ah ee Sudan iyo in kale.
Waxa uu ku nuuxnuuxsaday inay haystaan ​​afar bartilmaameed oo hogaamin doona qiimayntooda maalmaha soo socda.
“Lambarka koowaad waa sii deynta dhammaan dadkii xirnaa tan iyo 25-kii Oktoobar. Midda labaad waa qaadista xaaladda degdegga ah. Seddexaad waa soo afjarida dhammaan rabshadaha ciidamada ammaanka ee ka dhanka ah dibadbaxayaasha nabdoon. Afaraadna waa dhameystirka hannaanka soo xulista golaha wasiirrada oo ay hoggaaminayaan shacabka,” ayuu yiri.
(This story #Congress-ka Maraykanka oo diyaarinaya cunaqabatayn ka dhan ah hogaamiyayaashii afgambiga ku qabsaday Suudaan. Has not been edited by Axadle Staff and has been auto-generated from the Syndicate feed.) while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information or related graphics contained on the post for any purpose.